पढ्न मन लाग्दैन ? यसो गर्नुहोस |
पढ्न मन लाग्दैन ? यसो गर्नुहोस
On: २०७६ असार १७ गते, मंगलवार, १२:२४ बजे प्रकाशित
काठमाण्डौ । अहिले स्कुल कलेजमा रहेको पुस्ता सबैभन्दा बढी डिस्टर्ब छ । आईफोन, इन्टरनेट, मोवाईल, ल्यापटप अझ सामाजिक संजालको एक क्लिकमा आउने असंख्य सामग्री छनोट गरेर प्रयोग गर्न नसकेर पनि बर्तमान पुस्ता डिस्टर्ब छ । यसको असर विधार्थीको भविष्य सँगसँगै अभिभावकमा समेत परेको छ ।
विद्यार्थीलेको दुनियामा ज्ञान सँगसँगै सर्टि्फिकेटको पनि उत्तकै महत्व छ । सर्टि्फिकेट लिन स्कुल कलेजको परिक्षा पास हुनुपर्छ । अहिले पास भएर मात्र हुँदैन, उच्च अंक सहित उत्तिर्ण हुनु जरुरी छ त्यसैले पढ्न मन लागेन भनेर हुँदैन । अझ उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने सोच बनाइरहेका विद्यार्थीले पढ्न जरुरी छ । पढाईमा मन लगाउन केही काम गर्नु जरुरी छ । हामीले पढाई टिप्स तयार गरेका छौं जसलाई एक पटक नियमित प्रयोग गरेर हेर्नुहोला ।
मन पर्ने कुरा पढ्न थाल्नुहोसः सुरुमै कोर्षको किताब पढ्न मन नलाग्न सक्छ । त्यसैले कथा, उपन्यास वा तपाइको रुचिको विषयमा लेखिएको पुस्तक भेला गरेर पढ्न थाल्नुहोस जसले तपाइको पढ्ने बानी बस्छ ।सजिलो विषय वा शिर्षक छान्नुहोस् । हाम्रो उद्देश्य कोर्षको किताब पढेर राम्रो अंक ल्याउनु पर्छ भन्ने हो । त्यसैले कोर्षको सबै भन्दा सजिलो किताबको सजिलो शिर्षक छान्नुहोस् । सुरुमै अप्ठ्यारो बाट थाल्दा मन बिचलित हुन्छ ।
ठाउँको छनोट गर्नुहोस्ः यस्तो ठाउँको छनोट गर्नुहोस् जहाँ शान्त होस् ध्यान भंग गर्ने केही कुराहरु नहुन । बरु पढ्न आवश्यक सामाग्रीहरु लिन टाढा जानु नपरोस । विजुली, फेन, हिटर र पानीको राम्रो व्यस्था होस् । महान मान्छेका सोच बदल्ने भनाईहरु पढ्ने छेउमा टासेर पढ्नु भए पनि उर्जा मिलिरहन्छ ।
अल्छी लागे पनि पढी रहनुहोस्ः नपढी हुन्न भन्ने सोच बनाउनुहोस । एउटा रुटिन बनाउनुहोस र त्यसलाई कार्यनयन गरेर हेर्नुहोस । पढाईलाई जीवनको महत्वपूर्ण पाटो बनाउनुहोस । दैनिक नित्यकर्म फत्ते नगरी फ्रेश हुन् सकिन्न त्यस्तै नपढी हुन्न भन्ने सोच विकाश गर्नुहोस् ।
पढन्ते साथीहरुको संगत गर्नुहोस्ः गौतम वुद्धको एक महान भनाई छ ‘बरु एक्लै हिड् तर गलत साथीको संगत नगर’ त्यस्तै अहिलेको संगत जे जस्तो छ त्यो बिर्सनुहोस् र पढन्ते साथीहरु सँगको भेट्घाटलाई बढाउनुहोस् ।
ध्यान भंग गर्ने सामाग्रीहरुलाई हटाउनुहोस्ः विधार्थीको पढाईमा डिस्टर्ब गर्ने मुख्य सामाग्री भनेकै आईफोन, इन्टरनेट, सोसियल मिडिया, ल्यापटप मोवाईल हुन् । त्यसैले पढ्ने बेला यिनीहरुलाई आफु भन्दा दुर राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
अनुशासित बन्नुहोस्ः हर कुरामा सफल हुन् अनुशासनको ठुलो महत्व हुन्छ । पढाईमा पनि अनुशासित हुनुहोस् नियमित पढ्नुहोस् । तडकभडक बाट जोगिनुहोस् ।
आराम गर्नुहोस्ः नियमित १ देखी दुई घण्टा पढेपछि केही समय विश्राम लिनुहोस् । वरपर हिड्नुहोस्, संगीतमा रम्नुहोस, परिवारका सदश्य सँग कुरा गर्नुहोस् र १० मिनेट भित्र पुरानै ठाउँमा आएर पढ्न थालिहाल्नुहोस ।
प्रगति हेर्नुहोसः पहिला नपढ्दा र अहिले पढ्दाको प्रगति तुलना गर्नुहोस् । पक्कै अहिले राम्रो देखिने छ जसले तपाईलाई अझ मेहनतका साथ पढ्न प्रेरित गर्छ ।
स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्ः स्वास्थ्य बिना केही सम्भव छैन । त्यसैले स्वास्थ्यबर्द्धक खाना खानुहोस, ७ घण्टा मस्त निदाउनुहोस, नियमित योगा, ध्यान गर्नुहोस् । जसले तपाईलाई पढ्न अझ सहयोग गर्छ, उत्साहित बनाईराख्छ ।
२०७६ असार १७ गते, मंगलवार, १२:२४ बजे प्रकाशित